Ireo distro tsara indrindra ho an'ny netbook | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | FampiasanaLLL's UseLinux, Fitsinjarana
Tsy toy ny Windows na Mac, Linux dia manana fizarana isan-karazany izay mampiasa tontolo manodidina ny sary sy fampiharana amin'ny toerana misy anao. Ireo fifangaroana ireo dia mahatonga ny "distros" sasany ho maivana kokoa noho ny sasany na ny sasany amin'izy ireo dia mifanaraka tsara amin'ny hetsika manokana na karazana fitaovana manokana, toy ny netbook. Ny lisitra zarainay etsy ambany dia tsy natao hamerana; misy fizarana maro hafa izay afaka miasa tanteraka amin'ny netbook. Mamporisika anao fotsiny izahay hanolotra ireo izay, araka ny hevitray, no tsara indrindra na ireo izay natao manokana hampiasaina amin'ny netbook.
1 Toetra mampiavaka ny netbook
2 Mampiavaka ny distro netbook tsara
Toetra mampiavaka ny netbook
Ny fanamafisana dia ny fahamoran'ny fivezivezena (kely ny lanjany ary amin'ny ankapobeny manana androm-piainana lava).
Satria ny hery dia ny "fivezivezena", miankina betsaka amin'ny fifandraisana tsy misy tariby (wifi, Bluetooth, sns.)
Izy io dia manana RAM somary antonony, matetika 1GB / 2GB.
Izy io dia manana efijery somary kely.
Mampiavaka ny distro netbook tsara
Ireo toetra voalaza etsy ambony dia ilaina amin'ny fizarana GNU / Linux safidintsika hanana ireto teboka "matanjaka" ireto:
Izany dia tsy mandany bateria betsaka ary, raha azo atao, dia mampiasa mekanisma fitsitsiana angovo maro izy io.
Tsy misy olana amin'ny famaritana ny wifi na bluetooth.
Izay mandany RAM kely.
Izy io dia manana interface "ahazoana aina" ary mifanaraka amin'ny haben'ny efijery (kely) izay hitantsika matetika amin'ny Internet.
Jolicloud dia miorina amin'ny Ubuntu, saingy natao hiasa amin'ny solosaina misy famaritana voafetra kokoa momba ny fahaizan'ny kapila, ny fitadidiana ary ny haben'ny efijery. Ny interface interface (HTML 5 + GNOME) dia mitovy amin'ny takelaka iray ary miavaka amin'ny hafainganam-pandehany sy ny fanjifana ambany ny loharano. Araka ny hita eo amin'ny pikantsary, JoliOS dia miompana indrindra amin'ny fampandehanana lozisialy (ChromeOS style), izay ampiasainy Mozilla Prism. Na izany na tsy izany, azo atao ihany koa ny mametraka rindran-damina zanatany, toa ny mpilalao horonantsary VLC, ary na dia mandeha tsy miteny aza izy io dia hangeja ny ranom-boankazo rehetra ity distro ity raha mifandray amin'ny Internet isika, azo atao ny mampiasa azy io ivelan'ny tsipika.
Ary farany, marihina fa azo atao ny mametraka ny JoliOS ao anaty Windows na Ubuntu (beta) toy ny hoe fampiharana hafa fotsiny izy io, izay mety indrindra ho an'ireo izay te-hitsapa azy io alohan'ny hametrahana azy amin'ny farany.
Izy io dia distro miorina amin'ny Ubuntu izay mampiasa ny tontolon'ny birao LXDE. Misongadina amin'ny fanjifana loharano tena ambany sy amin'ny fitovian'ny interface-ny maso amin'ny WinXP mahazatra ankehitriny, izay tena mahasarika an'ireo izay mandray ny dingana voalohany amin'ny GNU / Linux.
Na dia atokana ho an'ny netbook aza ireo distros rehetra miorina amin'ny LXDE, dia tsy isalasalana fa ny Lubuntu no tsara indrindra ho an'ireo vao tonga, tsy noho ny fitovian'ny interface-ny fijeriny an'io WinXP io, araka ny efa hitantsika, fa satria mitovy ihany vondrom-piarahamonina Ubuntu goavambe, manamora ny famahana ny olana mety hitranga.
Izy io dia fizarana GNU / Linux izay manararaotra ny fahafenoan'ny mpitantana ny varavarankely Enlightenment. Raha ny marina dia iray amin'ireo fizarana vitsivitsy ampiasain'ny Enlightenment izy io. Tonga izy, amin'ny alàlan'ny default, miaraka amina rindrambaiko farafahakeliny toy ny browser, editor an-tsoratra, fitaovana fitantanana fonosana, sns.
Ny marina indrindra, ny minimalism dia iray amin'ireo hevitra ao ambadiky ny Bodhi Linux, izay no antony tsy anolorana izany ho an'ireo vao tonga, na dia atolotra ho an'ireo manana traikefa sasantsasany amin'ny Linux aza izany. Ny zavatra manintona indrindra amin'ity distro ity dia ny hafainganam-pandehany miavaka sy ny takiana amin'ny rafitra tena ambany, sady manome traikefa amin'ny birao tena mahafinaritra, mora ampiasaina ary azo ovaina.
Sintomy ny Bodhi Linux
Miorina amin'ny Debian izy ary mampiasa mpitantana varavarankely Openbox. Ity layout ity dia natao hanolorana fifandanjana tsara eo amin'ny hafainganana sy ny fiasa. Miorina tsara toa an'i Debian ihany izy, ankoatry ny fampidirina am-pitoerana ny interface minimalista sy maoderina izay azo namboarina mora foana, nahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ny ekipa tsy manam-bola voafetra.
Tsy manitatra aho milaza fa io no iray amin'ireo fizarana GNU / Linux tsara indrindra misy ankehitriny.
Distro miorina amin'ny Puppy Linux izy fa mampiasa fonosana Ubuntu. Izy io dia manana tontolon'ny birao milay ary misy toetra mampiavaka azy (na dia somary lavitra aza) ny Mac OS X.
Macpup dia tonga amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fampiharana maimaimpoana marobe, toy ny AbiWord, Gnumeric, SeaMonkey ary Opera. Ny mpitantana ny varavarankely izay nampiasaina dia, Enlightenment indray, izay misongadina amin'ny fahombiazany amin'ny sary miaraka amin'ny loharanom-pahalalana vitsivitsy.
Sintomy ny MacPup
Izy io dia fizarana GNU / Linux miorina amin'ny Arch Linux, fizarana izay atolotra indrindra ho an'ireo mpampiasa mandroso kokoa, saingy manana ny toerana anaovany azy io. Ny fizarana dia mikendry ny ho tonga mpampiasa ary mitazona ny endri-javatra Arch, toy ny manager Pacman package sy ny AUR (Arch User's Repository) mifanentana. Ankoatry ny kinova lehibe miaraka amin'ny XFCE dia misy kinova ofisialy (maivana kokoa) izay mampiasa ny manager window window OpenBox. Misy ihany koa ny fanontana fiaraha-monina izay mampiasa E17, MATE, LXDE, Kanelina / Gnome-shell, ary KDE / Razor-qt.
Manjaro dia miavaka amin'ny fahatsorany sy ny hafaingany, mametraka ny herin'ny Arch Linux ho azon'ny mpampiasa "salantsalany / mandroso".
Izy io dia rafitra miasa "cloud-based" izay tonga miaraka amina karazana tranonkala amin'ny alàlan'ny default. Miorina amin'ny Lubuntu izy ary mampiasa ny tontolon'ny birao LXDE.
Tsy toy ny fizarana "centres web-centric" hafa, toa ny ChromeOS na JoliOS, Peppermint dia manana fifandraisana tena sariaka ho an'ireo izay avy amin'ny Windows ary aleony ny menio "Start" mahazatra.
Amin'ny ankapobeny Zorin OS dia natao haka tahaka ny fisehon'ny rafitra fiasa hafa. Azonao atao ny misafidy Windows 2000 na Mac OS X. Ho an'ny mpampiasa Windows dia manome endrika mahazatra ity distro ity. Ho fanampin'izany, mora be ny mampiasa azy, na dia misy rindrambaiko vitsivitsy aza apetraka aorin'izany.
Ampidino i Zorin
SolydX (XFCE) dia famoahana semi-Rolling mifototra amin'ny Debian. Ny tanjony dia ny ho mora ampiasaina, manome tontolo azo antoka sy azo antoka. Ny kinova natoro ho an'ny netbook dia mampiasa XFCE toy ny tontolon'ny birao, na dia mampatsiahy ny KDE aza izany. SolydX dia mampiasa ny wicd manager manager ho an'ny fifandraisana Internet ary tonga miaraka amina flash sy codecs MP3 napetrakao default. Ho fanampin'izany, dia misy karazana fampiharana maivana isan-karazany: Firefox, Exaile, VLC, Abiword ary Gnumeric.
Ampidino ny SolydX
Rafitra miasa "web-centric", mifototra amin'ny navigateur mitovy anarana sy Linux. Io ilay rafitra ampiasaina ao amin'ireo Chromebook malaza ankehitriny.
Iray amin'ireo teboka izay misongadina indrindra amin'ny Google ny hafainganan'ny rafitra, miaraka amn'ny fe-potoana booty mandritra ny 8 segondra ary fe-potoana famaranana somary fohy, ankoatry ny hafainganam-pandehany manokatra ny rindranasan-tranonkala. Ny antontan-taratasy, rindranasa, fanitarana ary fikirakirana rehetra dia voatazona an-tserasera eo ambanin'ny foto-kevitra momba ny computing cloud. Ka raha very ny masinin'ilay mpampiasa dia afaka mahazo hafa na fidirana amin'ny masinina hafa izy ary mahazo ny angon-drakitra mitovy amin'ny notahiriziny teo aloha.
Sintomy ny ChromOS
Araka ny hitantsika eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaim-poana, misy safidy maro ho an'ny netbook. Tokony hohazavaina fa ireo fizarana voalaza eto dia tsy napetraka araka ny filaharam-pitiavana. Raha ny tena izy, ny fizarana tsara indrindra dia ilay mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay ary miovaova mazava ho azy. Amin'ny ankapobeny, manoro hevitra ny "newbies" aho hanandrana ny Lubuntu, Crunchbang na MacPup, raha ireo "mandroso" bebe kokoa kosa dia afaka manandrana an'i Manjaro na SolydX.
Farany, tiako ny mpampiasa rehetra an'ireo distros ireo izay afaka nandefa ny hevitr'izy ireo mba hanan-karena kokoa sy ho mahasoa kokoa ho an'ireo manana netbook ity fidirana ity ary mieritreritra ny hanova ny Operating System.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ireo distro tsara indrindra ho an'ny netbook
121 hevitra, avelao ny anao
Nametraka debian tao amin'ny netbook-ko aho. Adinoko tanteraka na dia ny hanandrana ny Chrome OS> - <haha
Leon Jl dia hoy izy:
ary iza amin'ireo distro rehetra ireo no atoronao ho an'ny Compaq Presario dia vaovao amin'ity ary raha te-hifindra amin'ny linux aho
Mamaly an'i Leon Jl
teenwood8 dia hoy izy:
Salama, andramo ary andramo ny Manjaro na Lubuntu.
Mamaly an'i teenwood8
Sasori69 dia hoy izy:
Miaraka amin'ny Manjaro XFCE 64 bit (manana laptop 6GB ny laptop-ko) dia nafana tokoa ilay solosaina finday, nanandrana nihazakazaka ny Dota 2 aho ary nafana dia mafana ka niafara tamin'ny fanidiana.
Mamaly an'i Sasori69
pansxo in dia hoy izy:
Mety noho ny olan'ny fitaovana izany, tsy voatery hafana be izy io raha tsy hoe manandrana be ao anaty processeur ianao, izay tsy eritreretiko. Andramo linuxmint xfce 64 bit. Io no ampiasaiko ary mety amiko tanteraka izany. Raha toa ka mitohy amin'ny hafanana be loatra dia mamporisika anao aho hanadio ny solosainao ary hanova ny paty mafana. Miarahaba anao ary mirary soa!
Mamaly an'i pansxo, en
lalana lava sy miolakolaka izay mitady fizarana sahaza. Fitsapana 10 farafahakeliny no notsapako ary mahatsiravina ny overheating laptop. tsy olana momba ny fitaovana io fa olan'ny linux, ary olana efa malaza. Efa nanandrana ubuntu, lubuntu, xubuntu, kubuntu, debian mate, debian kde, debian xfce, crunchbang (bunsen), crunchbang ++, linuxmint kde, linuxmint mate (ity farany ity no tena mafana loatra, saingy mbola tsy latsaka ambany 70) . Ny distro irery tsy manafana dia an'i Kali, fa Kali tsy tiako i Kali ho distro lehibe, mila zavatra ahazoana aina kokoa sy tsy henjana aho. Handramako ny solydx hahitako ny fahasalamako
Valiny amin'ny da3m6n
Luis Miguel Mora dia hoy izy:
Amin'ny distro any Ubuntu rehetra, apetraho ny cpufreq ary apetraho amin'ny maody PowerSave, amin'izay dia hitazona ny fampiasana processeur ho ambany izy ary tsy hafana (apetaho koa ny psensor hanaraha-maso ny mari-panao)
Valiny tamin'i Luis Miguel Mora
Inona ny rafi-piasan'ny linux izay hatolonao ho an'ny asan'ny acer fa tsy ny netbook. Tiako ho haingana kokoa izy io satria raha milaza ny marina dia miadana kely izy
Valio amin'i MAXI
Gustavo Ramirez sary placeholder dia hoy izy:
Nisedra distro 3 aho ho an'ny HP Mini 110 miaraka amin'ny efijery 10.1 inch.
Ny hany fepetra takiko dia ny miasa ireo mpamily tsy misy tariby nefa tsy manao na inona na inona amin'izany, miaraka amin'ireo mpamily tsy misy tariby miasa afaka manamboatra zavatra ianao, sa tsy izany? 😉
Crunchbang: Ny tiako indrindra hatramin'ny nanandramako azy, mifototra amin'ny Debian dia maivana, interface minimalista izy io, koa aza manantena ny "bonbon-maso" rehetra avy amin'ny distro hafa, ho an'ny netbook dia tsara be ny zavatra ratsy dia ny mandany kely Miasa aho manamboatra azy io, saika ny fanaingoana rehetra dia tsy maintsy atao ao anaty fisie fikirakirana, ny zavatra tsara dia mitondra launcher ho an'ireo ao anaty menio. Ny zavatra ratsy dia tsy mandeha ny Wireless tamin'ny voalohany. Ny tombony an'io dia raha manana fidirana hampifandray azy amin'ny alàlan'ny tariby ethernet ianao dia afaka mametraka ny zava-drehetra tsy misy olana, mitondra script fanombohana izay mameno ireo programa sy mpamily farany indrindra, ho an'ny haino aman-jery sns.
EasyPeasy: Ity fizarana ity dia heverina ho manokana amin'ny netbook, nametraka azy aho, ary toa tsara izany, tsy nomeko fotoana firy hitsapana azy satria tsy nandeha tamin'ny voalohany ny findaiko.
OpenSUSE 12.1 (Gnome): Io distro io no napetrako, niasa ny mpamily tsy misy tariby nefa tsy nanao zavatra taminy, nametraka Chrome sy codec multimedia aho ary miasa tsy misy olana.
Araka ny efa noresahinao, ity netbook ity dia natao indrindra hijerena Internet, mail, LibreOffice, sns. ary miaraka amin'ny OpenSUSE dia mety amiko izany. Ambonin'ny zava-drehetra, mahafinaritra ny GNOME 3, tiako mihoatra ny 2 izany
Valiny tamin'i Gustavo Ramirez
wAlOmASteR dia hoy izy:
Mbola nitady zavatra mitovy ihany aho, nanandrana ny Lubuntu, ny Elementary OS Luna ary ny beta 1 sy 2 an'ny Freya sy Deepin Linux. Ny distro tokana nahita ny kara-wi-fi dia Deepin Linux, saingy nisy fotoana somary niadana kely. Amin'ny OS fanabeazana fototra dia tokony hampavitrikao azy ianao satria mpamily fananana dia tsy mametraka azy ho azy, tantara hafa i Lubuntu ary mila miasa mafy ianao hametraka ny mpamily !!! ...
Valio amin'i wAlOmASteR
ry zalahy ... netbook sy kahie ... samy hafa izy ireo ... aza diso ... kely kokoa ny kahie ... ary noho izany tsy ny distro rehetra no mifanaraka amin'ny efijery manodidina ny 11 santimetatra ... ohatra ... miaraka amin'ny ubuntu 12.04 ... daholo Tsara izany .. fa rehefa nosokafana ny varavarankely ho an'ny safidy toy ny fanovana ny valiha na ny hafa ... miafina ny faritra ambany amin'ny varavarankely ary ny bokotra sasany toy ny manaiky na manafoana (miankina amin'ny tranga) dia tsy azo kitihina ... ary ao amin'ny Safidy iray ihany no hiseho eo amin'ny efijery ... tsy misy ny fiovana ... Nataoko tamina notebook msi, hp ary acer ... ary miaraka amin'ireo telo ireo dia mitovy ... ary ps raha fantatrao fa misy mifanaraka amin'ny efijery kahie ampahafantaro ahy. aza gachos ... miarahaba ..
Very hevitra ve ianao?
Netbook dia solosaina kely misy efijery 10 santimetatra eo ho eo
Ny kahie dia laptop mahazatra izay lehibe kokoa.
lamberto dia hoy izy:
xubuntu sy lubuntu mety mety aminao. Nampiasa xubuntu 14.04 aho ary niaraka tamin'ny ram gigabyte 1 miaraka amin'ny neetbook asus tamin'ny 8 taona lasa izay. Miarahaba anao Jorge
Mamaly an'i lamberto
Angelsaracho dia hoy izy:
Ary ahoana ny amin'ny xpud? Haingana dia haingana izy io ary somary tsy mitovy ary mila kely ny fanarahana azy, indrindra ireo izay zatra birao.
Tsy betsaka ny azo atao, fa raha hizaha, manangana valan-dresaka an-tsarimihetsika mampiasa Skype ary miasa miaraka amin'ny Open Office dia ampy izay.
Indrindra rehefa nijanona tsy niasa ny SSD an'ny Acer.
Valiny tamin'i Angelsaracho
Juan Barra dia hoy izy:
Ilaina ny manonona ny ututo atom ho an'io karazana mpanamboatra 🙂 io
Valiny tamin'i Juan Barra
BRP dia hoy izy:
Tena manazava ny mombamomba anao. Misaotra anao
Valiny amin'i BRP
Manana olana amin'ny solosaina findaiko aho, nametraka UBUNTU 11.10 aho ho fampiharana saingy hita fa amin'ny alàlan'ny famerenana sy fidirana amin'ny mpankafy dia miasa foana izy io, ka mahatonga ny PC ho mafana loatra, tiako ho fantatra raha toa izany no misy amin'ireo distros asongadino eto.
Raimundo riquelme dia hoy izy:
Manana Ubuntu 12.04 ao amin'ny netbook Samsung aho ary tena faly aho! Na dia tsy ratsy aza ny mahalala fomba hafa 🙂 miarahaba
Valiny tamin'i Raimundo Riquelme
Ricardo C. Lucero dia hoy izy:
Manana netbook Samsung N150 Plus aho izay nanandramako ny Ubuntu 12.04 sy Joly. Folo izy ireo! Ankehitriny manana Mandriva 12 napetraka aho ary tiako indrindra… Ampiasaiko amin'ny birao KDE !!!
Valiny tamin'i Ricardo C. Lucero
Daniel Rossell dia hoy izy:
Tsy misy amin'ny pejy ofisialy ny Kuki Linux, ary na inona na inona nomeko azy dia tsy nahita rohy hampidinana azy aho. Manana maniry mafy aho ary tena maniry ny hanandrana izany fizarana izany. Misy mahalala hoe aiza no ahafahako misintona azy?
Valiny tamin'i Daniel Rossell
Hiditra ao amin'ireo voatondro ve i ElementaryOS?
OS fototra dia 10! Mampiasako azy no OS-ko lehibe
Tokony ho hitan'izy ireo ny fandehan'ny ISIS, hilentika izy ireo rehefa mahita ny isis ... io no distro tsara indrindra niasa tao amin'ny UX sy UI izay heveriko fa misy ao amin'ny linux, tsy misy isalasalana fa miasa tsara ny elemental, malahelo aho tsy manam-potoana handraisana anjara fa amin'ity indray mitoraka ity dia mikasa ny hanome $ 10 eo aho rehefa mivoaka ny isis ...
Manana Acer Aspire One aho, inona no distro amporisihinao?
Niaraka tamin'i Lubuntu aho ary nahafinaritra be mandra-pahatongan'ny fanalavirana ny fandefasana ny zava-drehetra, tsy haiko ny antony.
Heveriko fa safidy tsara i Lubuntu. Azonao atao ihany koa ny manandrana ny sasany miorina amin'ny Openbox, toy ny Crunchbang (miorina amin'ny Debian) na mankanesa any amin'ny lafiny maizin'ny hery ary andramo ny Arch (na dia ho an'ireo mpampiasa mandroso kokoa aza).
Tsy hita ny tsara indrindra, Point Linux miaraka amin'ny birao MATE, miorina amin'ny tranon'omby Debian 7. 🙂
Mahaliana… Tsy fantatro izy. Handinika izany aho.
Misaotra noho ny tolo-kevitra nataonao, Point Linux, andramako io amin'ny Dell mini -ko, ary miasa toy ny landy izy, tsara kokoa noho ny Ubuntu, saingy ity dia mikasika ny efijery raha toa ka fantatrao ny fivoarana momba an'io, ary ny feo amin'ny mpandahateny tsy mahomby amiko. , ary mihena izy io fa rehefa mametraka headphone aho dia tsy misy olana… Toy izany koa ao amin'ny Ubuntu 12 fa hatramin'ny nividianako azy dia nesoriko ny W7 telo taona lasa izay (Linux no ampiasako hatramin'ny 98 fa tsy manam-pahaizana aho… andao lazaina hoe mpampiasa »mahazatra»)
Tamin'ny zavatra niainako manokana, taona lasa izay dia nomen'izy ireo izahay netbook PC Asus EEE marobe, tena maotina, Celeron 700Mhz, 512 an'ny DDR2 RAM, kapila SSD 4 GB ary efijery 7 ″. Tantara fohy, ny safidy tsara indrindra tamin'izany fotoana izany dia i Debian niaraka tamin'ny LXDE, nandamina azy ireo tsara izahay ary nanome azy ireo ho an'ny sekoly ambanivohitra. nametraka fantsom-pifandraisana finday miaraka amina wifi sy cabling tambajotra izahay. Nametraka ny fitaovana tao amin'ny efitranon'ny solosaina sy voila izahay, izay nampifandraisina tamin'ny tamba-jotra tamin'ny mpanonta laserjet HP. nisy olana kely tamin'ny fijerena horonantsary youtube (ny ankamaroany dia noho ny fikirakirana EEA PC), noho izany dia nametraka pc matanjaka somary matanjaka kokoa izahay miaraka amina projecteur sy voila. 5 taona lasa izay ary mbola mandeha tsara ny solosaina, indroa isan-taona ihany izahay no manavao ny browser (Chromium) sy voila. Amin'ireo 4GB an'ny SSD, nisy kely mihoatra ny 1GB maimaim-poana amin'ny zavatra samihafa, satria ny rakitra dia ampifanarahana amin'ny mpizara afovoany.
Amin'izay lafiny izay, ny fahaizan'ny Debian fahita satria ny distro hafa dia maniry izany (ary mitandrema, Susero / Redhatero aho ato am-poko)
Misaotra anao nizara ny zavatra niainanao.
Manome hevitra aho etsy ambony, fa nanandrana distros vitsivitsy tamina birao xxce xfce sns .. ary ilay nanaitra ahy tamin'ny fahaizany azy, tamin'ireo rehetra notsapako dia LUBUNTU .. Hitako fa tsy mampino ireo distros miaraka amin'ilay birao mitovy ( xfce) dia hihazakazaka amin'ny fomba hafa.
Raha fintinina, ho an'ireo izay mampiasa netbook na solosaina manana loharanom-pahalalana vitsy dia tsy tokony hanenenako izy ireo.
Salama pansxo, amin'ny:
Tsy dia fantatro loatra izy ireo fa amiko dia toa mampiasa LXDE sy Xubuntu XFCE i Lubuntu.
UPS! bibikely kely amin'ny hevitro haha ​​illukki ity, mampiasa LXDE i lubuntu
Marina izany, i Lubuntu dia mitantana LXDE. 🙂
Salama ry zalahy, manana netbook AO250 maniry Acer aho ary nanandrana izao manaraka izao, Linux mint xfce; xubuntu 12.04, os fototra. Tsy isalasalana fa amin'ireo minitra telo nopotsirina ny masony niaraka tamin'io fihinanana 128mb teo am-boalohany io dia ilay iray izay tsy dia tadidiko loatra ny famatsiana ahy, ankehitriny miaraka amin'ireo safidy ireo aho dia manamboatra ny bibikely ary manandrana bodhi, arahabaina,
Raha ny amiko dia nametraka an'i Manjaro Xfce tao amin'ny netbook sipako aho. Namboariko tamin'ny lohahevitra Trisquel izy io satria tianao kokoa izany. Ny tena marina dia toa milamina sy mora ampiasaina izy io; izy tenany ihany no nilaza fa nanomboka tiany ny GNU / Linux. Ny olana tokana ananako dia ny tsy fanalahidin'ny lakilen'ny famirapiratan'ny efijery (nanandrana ny vahaolana tamin'ny lahatsoratra iray aho fa tsy nisy) na izany aza tsy zava-dehibe izany.
Nisy zavatra nitovizany tamiko tamin'ny rahavaviko, niaraka tamin'ny netbook samsung .. manome olana amin'ny jiro izany, ny olana dia, rehefa alefanao amin'ny solosaina ny solosaina finday dia mandeha izy io toy ny maody maivana ary tsy azonao atao ny mampakatra azy amin'ny tanana, ny hany vahaolana dia ny mamelona azy io indray miaraka amin'ny herinaratra mifandray, ary avy eo ampiasao amin'ny batterie, ka mitazona jiro avo be.
Tsy mandeha izany?
Mahagaga ahy ny tsy fisian'ny tànana ankavanana miaraka amin'ny KDE sy ny plasma-netbook misy azy. Mampiasa chakra aho ary mihazakazaka mahatalanjona ny marina nefa aleoko amin'ny RAM 2GB
... raha ny hevitro, izay avy amin'ny efijery 10-inch, ny plasma-netbook dia toa tsy nilaina velively. Amin'ny maody birao na "Pc" dia milamina ny zava-drehetra.
Joli Cloud tsy mbola naato vao haingana?!
Tsy hoe fantatro. Mbola mavitrika hatrany ilay tranokala ary tsy milaza fa najanona izany.
Tadidiko ny famakiana azy ...
Vaovao mampalahelo, tsy fantatro.
En http://jolios.org/ tsy milaza na inona na inona momba ny fampiatoana azy ... eny ... tsy haiko.
Misaotra anao koa.
Mika_Seido dia hoy izy:
Izaho sy ny rahavaviko dia manana netbooks, iray volana latsaka kely izay dia nametraka an'i Lubuntu aho, noho ny fahasarotany ny varavarankely nanalefaka ny masininao, vao haingana izy no niantso azy ary nilaza tamiko fa efa zatra ny OS izy ary misokatra haingana ireo programa ary tsara fitondran-tena izy ireo amin'ny ankapobeny.
Ho ahy, roa andro lasa izay dia nametraka an'i Debian + LXDE tao amin'ny netbook-ko aho, ary mandeha tsara izany: haingana, mahomby, mitandrina ny mari-pana ary amin'ny ankapobeny tiako izany. Talohan'ny nametrahako ny Manjaro + LXDE (kinovan'ny vondrom-piarahamonina) saingy tsy mandeha tsara izy io, tapaka ny totozy nandritra ny fotoana rehetra, tafahoatra ny hafanana ary amin'ny ankapobeny tsy mety amiko ny fiovana, izany dia satria efa nahazatra an'i Debian tamin'ny PC-birao aho Na ahoana na ahoana, dia homeko fotoana iray indray i Manjaro fa amin'ny PC, ary amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny kinova ofisialy.
Valiny amin'i Mika_Seido
Safidy tsara i Lubuntu, saingy mankarary fo fa ny kinova "13.10" ankehitriny dia manana olana lehibe amin'ny Xscreensaver ary ny olana dia TSY MITONDRA AZY ary manjary maizina ny écran afaka 3 min, ary na dia apetrakao ilay Xscreensaver faly aza dia tsy ampiharo ny fanovana
fara tampon'ny dia hoy izy:
Valiny amin'ny apex
Fantatro fa tsy ampy ny nataoko ... 🙂
Safidy tena tsara i Slitaz ...
Tsara ny fidirana.
Hey, miala tsiny fa ny rohy Google Chrome OS dia tsy marina, rohy mankany Cr Os izy ireo, tsy mitovy izy ireo.
Dekomu dia hoy izy:
Betsaka ny zavatra tsy fantatro, indrindra ny Bodhi Linux, tsy maharary mihitsy ny manandrana azy ireo
fa ho an'ny kahieko dia aleoko lubuntu, io no mety aminy indrindra 😛
Mamaly an'i Dekomu
Ny netbook-ko dia niaraka tamin'i SUSE Linux 11 tany am-piandohana, Compaq Mini CQ10-811LA izany, lafo 800 dolara aho roa taona lasa izay, rehefa elaela te-hiova dia tsy nanana hevitra hanao backup na zavatra hafa aho ka dia nandefa ny tenako, raha nanao asa tsy azo tanterahina satria tsy afaka mamaky avy amin'ny USB aho, rehefa afaka kelikely dia hitako ilay fikafika, rehefa avy nametraka UnetBooting aho dia tsy maintsy nanindry bokotra iray ary avy eo vao nanao boot aho, nametraka EasyPeasy satria io irery no booting (tamin'ny voalohany dia nieritreritra aho fahagagana izany, saingy nahita ny fikafika aho ary nanandrana distro hafa), saingy tsy nahafantatra ahy ny wifi-ko ary mila nampiasa tariby aho.
Reraka aho ary nametraka OpenSuse 12.2 KDE, antonony izany, saingy tsy nahazo aina aho.
Nahita an'i Fuduntu aho ary ... nifankatia aho, niasa tsara ny zava-drehetra, na dia maharitra kokoa aza ny bateria, niasa tsara sy marina ny trackpack, nitondra loharanom-pifandraisana ny LibreOffice saingy nifarana ilay tetikasa ary rehefa tsy hitako izay distro tiako ( Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint, Puppy, OpenSuse) Nanapa-kevitra ny hametraka Win7 aho, ary eto aho.
Tato ho ato dia mikasa ny hametraka ny Lubuntu ao amin'ny netbook-ko aho ary hanohy hanandrana ny hafa mandra-pahitako ilay manome ahy ilay fahatsapana nomen'i Fuduntu ahy
Eo alohan'izay! Mila miezaka hatrany ianao ... 🙂
Eny ... Mampiasa betsaka an'ity netbook anaovako soratako ity aho. Intel Atom 64 bitika - 1,6 Ghz sy ondrilahy 2 Gb. Niaraka tamin'i debian foana aho, ary na dia fantatro aza fa tsy mety izany tamin'ny voalohany, dia nisafidy ny hametraka KADE ao amin'ny wheezy -kernel 3.2 sy kde 4.8-. ary mandeha aho. Ny Dolphin dia maharitra 3 na 4 segondra hatramin'ny nitantananao azy? eny ... ary avy eo mandeha tsara. Icewesel dia efa ela kokoa ... 10 segondra eo ho eo ... fa satria ny andiany 27 dia haingana dia haingana ny fandefasana amin'ny tranonkala. Mampiseho izany fa haingana kokoa noho izay avelan'ny mpanodina ahy. Mampiasa java sy clementine aho, ary misokatra amin'ny KADE ny zava-drehetra ary tsy mihoatra ny 1,6 ram izany .. miaraka amin'ny libreoffice ihany koa, adinoko.
Manana debian sid -kernel 3.12 sy kde 4.11- ianao izao ary notapahina antsasaky ny tranga rehetra izay (tsy ela).
Moral: ny birao maivana kokoa (lxde, na raha tsy mila boaty fanokafana fotsiny ianao) dia tsy hisorohana ny fampiharana toa ny mpitety, ny offimatika, izay mampiasa java na famolavolana hazakazaka haingana kokoa.
Noho izany, raha manana ondrilahy 2 Gb ianao dia afaka mametraka kde na gnome mora foana tsy misy olana lehibe (na dia toa tsy mandany betsaka aza ny gnome dia tsy tadidiko ny antony nanandramako kely).
Izany no zavatra niainako ary marina izany. Ahoana raha misy kernel mahafinaritra ao anaty andohalambo namboarina ho an'ny netbook izay hitako tamin'ny deba fa 32 bit. Ity raha afaka manampy ny fandidiana amin'ny ankapobeny fa tsy distro sy ny birao.
Hadinoko ny naneho hevitra momba ny zava-misy manan-danja iray hafa. Ny mari-pana dia mihoatra ny 40 C ary latsaky ny 50 C amin'ny toe-javatra mahazatra. Ny bateria aorian'ny herintaona dia manohy maharitra ahy mihoatra ny adiny telo toy ny tamin'ny voalohany. Tsy misy olana amin'ireo. Toa mahay tokoa ny fitantanana !!
valovatsonita dia hoy izy:
Nahaliana ahy ilay lahatsoratra. Ny ankamaroan'ny fizarana izay tsy fantatro afa-tsy Manjaro sy ChromOS. Hotsapaiko ho milina virtoaly izy ireo hahitako izay toa ahy.
Mamaly an'i ochobitsunbyte
Tsara! Izany no hevitra. Amporisiho izy ireo hanandrana distro vaovao. 🙂
fluff dia hoy izy:
Izaho ho an'ny netbook na cruchbang na Archbang dia samy toa safidy tsara tokoa, ho an'ny tsiriko dia feno fonosana be izy io
Mamaly ny fluff
Ho ahy, Archbang dia manambatra ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa. Safidy lehibe io. Saika sahy nilaza aho fa ny iray amin'ireo distro tsara indrindra (maivana).
Nametraka linux mint tamin'ny lapako HP G42 aho satria noheveriko fa maivana ...
Inona araka ny hevitrao no tsara? sa mamporisika ireo hafa amin'ity lahatsoratra ity ianao sa izay iray?
izay tadiaviko fampisehoana, fantatrao, hafainganana sns ...
elementaryOS amin'ny netbook dia tena mandeha tokoa, mazava ho azy, misy vokany sembana, aloka ary izany rehetra izany, saingy mbola tsara tarehy ... ny tena izy dia (tsy misy fanafihana) toy ny miniMac nefa azo ampiasaina.
Angamba izy io satria saika nosoratana tamin'ny Vala, fa tena anolorako azy kosa.
Hadinoko, ny manandrana Android ho an'ny PC sy Chrome OS, liana aho ...
Mahaliana! Misaotra anao nandao ny hevitrao.
elementososy dia toy ny landy, mandeha tsara ny zava-drehetra.
Misaotra ny fanangonana, satria nirehitra ny kapila mafy HP mini-ko, manandramana distros aho, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahomby amin'ny fifandraisana Wi-Fi, mampiasa azy ireo amin'ny alàlan'ny booty avy amin'ny pendrive aho, tiako ny milaza fa raha apetrako izy ireo dia wifislax izay miasa 100% miaraka amin'ny wifi fa tsy manana birao misokatra na birao malalaka, tsy dia azoko loatra ny fikirizana fa tsy afaka nitahiry ireo fanovana nataoko tamin'ny fikirizako rehefa nanontany izy amin'ny farany dia tianao ho misy ny fanovana ho an'ny fotoana manaraka? ny miasa amin'ny internet dia tsara.
Hiezaka ireo rehetra voatanisa eto aho, arahaba, mandrosoa ary misaotra ny vaovao.
Wilson Cortegana dia hoy izy:
Salama, manantena aho fa hamaly ahy izy ireo haha, manana netbook Samsung N102SP aho, nametraka ny Ubuntu 13.10 andro vitsivitsy lasa izay ary ny marina dia nisy diso fanantenana aho noho ilay fampisehoana (tena miadana, mihoatra ny tamin'ny fotoana nanaovako windows7), ankehitriny mampahafantatra ahy ireo distros ireo, tiako ho fantatra izay mety kokoa.
Valiny tamin'i Wilson Cortegana
Manoro hevitra ny linuxmint 16 miaraka amin'ny birao xfce aho. Izy io dia distro tena feno miaraka amin'ny iray amin'ireo birao maivana indrindra sy be ranoka. Azo antoka fa tsy handiso fanantenana anao ity distro ity. Vintana!
Bryantcore dia hoy izy:
Izaho koa dia manana an'io netbook io, nametraka CrunchBang 11 aho ary tsy fantany ianao (na misy olana) amin'ny karatra tambajotra, avy eo nametraka Lubuntu aho fa tsy maintsy nampidina mpamily. Ankehitriny dia nifidy ny Elementary OS aho, efa manana ny fandehany.
Valiny tamin'i Bryantcore
Pd_car dia hoy izy:
Salama, vaovao aho eto ary efa namaky ny lahatsoratra sy hevitra vitsivitsy, tiako ho anao ny manome distro ho an'ny netbook-ko. Packard Bell dot se2 izy ity, miaraka amina processeur Intel atom n570, 1gb DDR3 RAM, Windows 7 ... Manantena aho fa hanampy ahy ianao satria manana olana kely rehefa misafidy izay mety indrindra, ny olana amin'ny netbook-ko dia amin'ny ankapobeny. fanokafana miadana ny programa sy pejy web ary mihitsoka foana.
Mamaly an'i Pd_car
Manoro hevitra ny linuxmint 16 x86 amin'ny birao xfce aho. Notsapaina tamina boky netbook misy fiasa mitovy aminy.
Andramo ny SDSOS ary ovao amin'ny Midium ny Midori. Manidina!
Fandraisana anjara tena tsara, hizaha toetra an'i Lubuntu amin'ity kahie RAM 1GB ity aho.
Psdt: azonao atao ny manampy ny Damn Small Linux, distro 50 MB ihany; Mihobia!
Inona no distro atoronao ho an'ny Toshiba NB50 miaraka amin'ny 2GB (nitarina) miaraka amina processeur 4 taona?
Raha OS chrome, ahoana no hataoko?
matory, mieritreritra ve ianao fa handeha tsara amin'ny Point Netbook (Toshiba NB250) ny Point Linux miaraka amina processeur Intel Atom izay efa 4 taona ary tena petadisc?
Salamander dia hoy izy:
Salamdreate sy salamander ankoatra fa salamander dia salamander ary mamporisika anao salamandri 92.4 fa salamander no salamander anao ilay salamander
Mamaly an'i Salamander
Elvis dia hoy izy:
Vao andro vitsy lasa izay dia nandalina ny zava-drehetra mifandraika amin'ny Linux aho, amin'ny maha mpampiasa Windows ahy dia nahatsapa ho tsy niraharaha izany aho saingy tokony holazaiko fa tena mafana fo aho ary maniry ny hampiasa ary indrindra hijery ny tontolon'ny Free Software ho an'ny fahafaha-manao betsaka azo arosony, ary indrindra ho an'ny toetran'ny olombelona an'ity firehan-kevitra hizara fahalalana ity ho soa ho an'ny olombelona rehetra, misaotra tamin'ny fandraisana anjara, arahaba.
Mamaly an'i elvis
Salama, inona no atolonao ho an'ny netbook ram 1gb sy processeur mono core 1.6GHz? Nieritreritra momba ny OS ELementary aho.
Elementary Os… dia distro tena tsara… minimalist ary manintona. Saingy indrisy noho ny fitaovanao dia tsy hitako ho safidy tsara indrindra satria birao somary mitaky be noho ny hafa toa ny lxde na xfce ilay birao. Raha tsy dia miraharaha firy ny lafiny ianao dia mamporisika anao aho mba hitrandrahana amin'ny desktop desktop lxde, ny maivana indrindra efa nanandramako hatrizay. manintona kokoa noho ny lxde fa averiko tadidy mitaky fitakiana bebe kokoa. Manantena aho fa tsara vintana ianao ary lazao anay ny fomba.
Jose J Gascon dia hoy izy:
Efa nanandrana fizarana linux maro tamin'ny Netbook avy amin'ny Mint aho, tamin'ny alàlan'ny Debian, Android, sns .Nanana olana tamin'ny famirapiratan'ny birao aho, mandra-panandramako ny Linux Ultimate Edition 3.8 http://ultimateedition.info/, mandeha haingana izy ary raha tsy tianao ny birao Mate, miaraka amin'ny fanaovana amin'ny terminal sudo apt-get install gnome, apetraho ny desktop gnome, miaraka amina fallnick gnome sy gnome fallback fiaramanidina tsy misy gimmicks, ary gnome 3, ary zavatra toy ny firaisankina na firaisan-kina ankoatry ny Xbmc izay tonga toy ny fampiharana mahazatra ary mahatonga azy io ho tena mora ampiasaina, raha ny tadiavinao dia Xbmc ho an'ny ivontoerana fialamboly an-trano, miaraka amin'izany no anananao ny tontolo 2, raha mankaleo anao xbmc ianao dia afaka mampiasa ny herin'ny solosaina rehetra amin'ny alàlan'ny fanitsiana izany amin'ny anao ilaina, azo ovaina tsy misy fetra.
Ataoko amin'ny netbook Gateway LT4002m, diso aho ary nametraka fanontana farany 3.8 amd64, ny netbook dia 32 bit ary miasa tonga lafatra,
Valiny tamin'i Jose J Gascon
Celso mazariegos dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny torohevitrao.
Amin'izao fotoana izao ao amin'ny solosainako mampiasa Xubunto 10.2.
Miaraka amin'ny torohevitrao dia hametraka LUBUNTU-14.04 aho. Ho hitako ny fandehany.
Valiny tamin'i Celso Mazariegos
erretrogamer dia hoy izy:
Mampiasa Linux Mint 17 Mate aho ary tena mandaitra izany.
Hiezaka ny Chrome OS aho, saingy satria mivezivezy fotsiny izany fa tsy misy zavatra hafa, raha tsy afaka mametraka fonosana sy zavatra toy izany ...
Mamaly an'i erretrogamer
tsininy dia hoy izy:
Salama daholo, mamorona fizarana antsoina hoe Xanadu Linux ho an'ny solosaina manana loharano vitsivitsy mifototra amin'ny Debian SID aho, ao anaty beta izany, raha misy aminareo te hanandrana azy ka hanome ny hevitrareo, dia horaisina tsara izany, eto ny adiresy avy aiza azo sintonina: https://xanadulinux.wordpress.com/
Valiny amin'ny sinfallas
Okay. Hosedraiko izany. misaotra!
Dennis L. dia hoy izy:
Raha mizara fizarana izay tsy manafana ny solosaina finday loatra izy ireo dia izany no ho fizarako Haha
Valiny tamin'i Dennis L.
Eny, manana HP efa antitra aho, hp elitebook 6930p, tena tsara ary mandeha tsara amin'ny Windows, satria rehefa manandrana fizarana Linux samihafa ianao, dia ny Fedora, Linux Mint, Ubuntu, Xubuntu, Kali, Elementary, Debian , ary samy manana ny valiny mitovy, mafana be ny solosaina finday ... Hafahafa izany satria tsy nisy izany tamin'ny Windows, ary tsy nitranga izany satria napetrako tamin'ny partition. Misy mahalala ny fizarana izay tsy mahatonga an'io ?? Leo ny fitsapana sy ny fitsapana aho ary mitovy amin'ny fizarana rehetra… Misy fanampiana ve ??
Ary inona no nanjo an'i lxle izay tsara lavitra noho ny lubuntu sy ny hafa, tsara ny famerenana ny LXLE http://lxle.net/
fampitsaharana dia hoy izy:
Mahaliana, amin'izao fotoana izao tsy manana "solosaina" aho, netbook 1.66 GHz vendrana sy RAM 1DR DDR2, amin'ny resaka fanjifana loharanom-pahalalana, hatraiza ny fahasamihafana misy eo amin'ny linux arch "pure", manjaro ary crunchbang?
Tsy misy miresaka momba an'i Elive ???
jorgegeek dia hoy izy:
crunchbang tsy isalasalana fa ny tsara indrindra….
Mamaly an'i jorgegeek
Manaiky aho, tompokolahy.
Mazava ho azy fa ny tsara indrindra, nametraka azy aho ary nandika izany tamin'ny USB, mba hahafahako manamboatra solosaina maromaro amin'ny PC, ampiasaiko amin'ny Thinkpad T43 izany.
Miarahaba ahy manana mintosx dia linux ao amin'ny lapiny amin'ny 64 bit ary tsara kokoa noho ny mandresy 7 ary gaga aho amin'ny hafainganam-pandehany, rehefa manokatra varavarankely marobe, ary amin'ny faramparan'ny 2014.1 ary tsara ihany koa.
Azafady mba atoroy hoe iza no tokony hampiasako. Mitady distro linux aho
tsy manana olana mamiratra izany, ary ahafahako manova ny famirapiratany
mora, indrindra ho an'ny solosaina tsy misy fahatsiarovana 400 latsaka
Miandry ny valiny aho.
Salama hariva, voan'ny rindrambaiko maivana ho an'ny masinina voafaritra ambany foana aho, ary nisy fotoana nilako filokana tamin'ny Ubuntu sy "gadget" zavatra tsy vitako izao, ary ny marina dia nisaraka tamin'ny Linux aho noho ny Izany, tsy raharahako ny mametraka azy ireo amin'izany sao matahotra ny ho voavaha ny olana kely.
farafaharatsiny efa voavaha izany ..
Lionofsnow Aterrazombies dia hoy izy:
Salama, misaotra tamin'ny vaovao. Manana ny Window fahavalo sy Zorin 9. Misintona OS hafahafa ihany koa, antsoina hoe ReactOs ... indrisy fa nijanona nandritra ny fotoana fohy ny "cd live" nanao zavatra tamin'ny fitaovana ary tsy afaka nametraka azy mihitsy aho (okay, izaho io) . Azoko atao ve ny mampianatra ahy an'ity OS ity azafady, misaotra anao aho.
Mamaly an'i Lionofsnow Aterrazombies
Beleriota dia hoy izy:
Ny zavatra niainako niaraka tamin'ny Acer Aspire One D257 faharoa (processeur Intel Atom, kapila 2 Gb Ram ary kapila 500 Gb) dia ny fitsapana ny Fedora 21 tamin'ny Live CD dia tsy nahafantatra ilay klavier; noho izany dia nanandrana tamin'ny Ubuntu 14.10 aho ary tsy nisy ny olana amin'ny fanekena ny keyboard na ny Wifi, mila manampy ny Espaniôla fotsiny izahay. Nampaherezin'ity lahatsoratra ity aho, namafa ny Ubuntu aho ary nametraka ny Lubuntu 14.10, izay ankoatry ny fanekena ny Wi-Fi, ny kitendry (tsy maintsy apetraka amin'ny fomba tsotra ny fanohanana), midira haingana ary jereo tsara ireo horonantsary YouTube. Amin'izao fotoana izao dia milamina ny zava-drehetra.
Misaotra noho ny hafatra navoakanao fa tena manampy tokoa izy ireo.
Valiny tamin'i Belerioth
Salama, tiako ho fantatra hoe iza no rafitra fiasa tsara indrindra ho an'ity milina ity
inteel gma3600 fampisehoana mpamily
manohana x64 sy x86
araky ny linux ny mpamily sary ampiasainy dia PowerVR SGX545
Fedora x64 no hany nanome ahy ny tontolo gnome3 tena tsara x marina
Mila olona mandeha manodidina miaraka amin'ity milina ity aho satria tena manaitra ahy ny resaka sary
Gilgamesh dia hoy izy:
Tena tsara ilay lahatsoratra, avy am-baravarankely aho ary mandray ny dingana voalohany ao anatin'ny Ubuntu, eo amin'ny tontolon'ny Linux, hatreto, olana izay nahafahako namaha tamin'ny fikarohana fotsiny ny fampahalalana, indrindra tao amin'ny desdelinux, ny fotoana nalain'izy ireo dia ankasitrahana.
Valiny amin'i Gilgamesh
Nampiasa crunchbang nandritra ny 2 taona tamina hp mini 110 aho niaraka tamin'ny 2gb da ram ary nahagaga haingana izany, azo antoka raha fintinina, vatosoa!
fa ny programa sasany dia efa lany andro loatra ary ny sasany kosa tsy azo atao apetraka intsony satria ilay vaovao angamba ...
Na izany na tsy izany, niverina tamin'ny windows 7 tamin'io masinina io fotsiny aho ho an'ny Bluetooth, fa ny asa tsy maintsy nataoko tany dia efa vita, ka hitako ny fizarana haingana toy ny CB na mihoatra aza ary mazava ho azy mamela ahy hanana ireo programa farany teo ...
Na dia voalaza aza fa ny netbook dia hanamarinana ny mailany fotsiny na hampidirany ny chat, heveriko fa misy lesoka satria nandritra ny fotoana nampiasako azy tamin'ny CB dia nisy milina kely nanao ny zavatra rehetra (raha mbola avelan'ny processeur) foibe multimedia io, loharano fidiram-bola, ny fapmachine… ny zava-drehetra!
fa araky ny nolazaiko dia somary antitra ny CB ary mitady zavatra hitovy aho nefa maoderina kokoa….
Mameno ny lahatsoratra aho, miaraka amin'ny antsipiriany momba ny rafitra miasa rehetra. Ho ahy manokana, satria kely ny RAM an'ny Notebooks, dia miasa tanteraka i Ubuntu. Izy io dia manana fifandraisana tena sariaka ary mora ampiasaina. Tsy toy ny rafitra miasa hafa fa maimaim-poana miaraka amin'ireo fampiharana avo lenta rehetra.
Ry namako, manana Dell Inspiron Mini 10V aho ary ao anatiny, manana ny xPud napetraka aho, ary somary "mankaleo" satria rafitra "tsara" fa "vetivety", tsy misy fanovana apetraka ary tsy azo apetraka ny rindranasa ary efa najanona. , izay atolotrao ho an'ny netbook Dell Inspiron Mini 10V. Mihobia!
soso-kevitra: manome soso-kevitra 2, iray, ny tsara indrindra arakaraka ny toetran'ny naoty sy 2, iray izay mifanaraka na afaka mametraka rindrambaiko na fonosana, izay ahafahako manitsy tranonkala, html, php, sns ary mpanonta sary sasany izay no Mikarakara bebe kokoa aho, tao amin'ny xPud dia nahavita nametraka editor sary iray tena mitovy amin'ny Photoshop aho. Mihobia!
Fausto dia hoy izy:
Nanandrana distro maromaro voalaza eto aho ary tsara izy ireo, mila manandrana ny JoliOS aho satria manintona ahy tena izany, na izany aza, avelao aho hiteny aminao fa amin'izao fotoana izao ary efa nampiasa openuse foana aho, ary mahafinaritra ihany koa
Mamaly an'i fausto
furuikisui dia hoy izy:
Mampiasa chromebook aho, ary mitondra chrome os, okay, navigateur haingana izy io ary, zara raha misy apps ivelan'ny Internet ary manelingelina ahy izany. 🙁 rehefa tonga amin'ny alàlan'ny toerana misy anao izy dia matahotra ny hanova ny OS ho an'ny iray hafa, izay tsy hanomboka indray ary saika tsy misy fampianarana momba ny fanovana na famahana ity fitaovana ity.
Manoro hevitra anao aho hanandrana azy raha manana izany amin'ny solosaina ianao, ohatra ao an-dakozia, na ao amin'ny trano fidiovana, na eo akaikin'ny fahitalavitra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Raha mbola misy wifi dia mandeha amin'ny zavatra rehetra izy.
Mamaly an'i furuikisui
Manana solosaina finday acer maniry 3756z aho, efijery 15.6, RAM 4GB, processeur Intel Pentiun dual core T4200 2.30 Gz, kapila mafy 300 GB. Inona no fizarana Linux amporisihinao?
opensuse XD Manoro hevitra ahy foana aho fa efa nampiasaina nandritra ny taona maro, nanandrana ihany koa aho i Ubunku, Kubuntu, Fedora, mmm maromaro fa tiako izany amin'ny ankapobeny dia atoroko anao amin'ny birao GNOME fa efa nampiasa KDE foana aho fa haingana kokoa amin'ny masiniko izany.
Azafady, maika izany, afaka misy miteny amiko ve hoe iza amin'ireo rafi-pandaminana rehetra ireo programa nentin-drazana azo apetraka toy ny amin'ny windows !!!!!!!!!!
daholo. Mila mamorona fizara ho an'ny windows fotsiny ianao ary manitatra ho an'ny distro linux anao, Ubuntu no tsotra indrindra amin'ny resaka boot roa
vvv dia hoy izy:
Ny zava-mitranga amiko dia ny fotoana nanandramako linux dia ampy ahy tao anatin'ny 2 ora, tsy afaka milaza aho fa efa nanandrana distros maro (ubuntu sy fedora) fa ny zavatra mahalasa adala ahy dia ny zavatra rehetra tadiaviko hapetraka dia tsy maintsy ataonao misintona zavatra hafa aloha, na mampiditra baiko. Ny endri-javatra iray amin'ireo fikandrana izay tsy mbola hitako tamin'ny OS hafa dia ny fanamorana ny fametrahana programa.
Manana faniriana acer aho miaraka amina 2gh sy 2gb ram, 32gb eMMC. Miaraka amin'ny windows dia mandeha tsara izy io nefa indraindray manana ny mahazatra azy amin'ny Internet browser. Tsy manana fitarainana manokana aho fa tiako ny misafidy linux iray izay manome fikitika hafa ny pc ivelan'ny fenitry ny windows.
Marihina fa miompana amin'ny anjerimanontolo ny solosaina.
Raha misy olona mandroso afaka manome soso-kevitra amiko rafitra fandidiana izay mifanaraka amin'ny farafaharatsiny farafaharatsiko dia tiako izany, raha tsy izany dia hanohy win8.1 aho.
Mamaly an'i vvjvg
JoseV. dia hoy izy:
Manoro hevitra anao aho hijanona ao amin'ny Windows anao ary lazaiko anao amin'ny fanajana feno, tsy misy na inona na inona hitory filazantsara anao, na hanala devoly an'i Microsoft. Mampiseho ny hevitrao fa tsy mifanaraka amin'ny fomba fiasan'ny Linux ianao. Ary izao ny pitsopitsony: Mety tianao izany na halanao. Raha tianao izany dia hitady ny fomba hahalalana ny fomba fiasao ianao ary hiatrika ireo fanambin'ny fianarana ny zavatra rehetra raha tsy ... tsy ho anao izany. Nampiasa Linux aho nanomboka tamin'ny taona 1998 tao amin'ny biraoko. Manana Dell mini mampiasa Windows (ary mampiasa rindrambaiko maimaimpoana) Windows Phone sy Android aho ary tsy manana olana amin'ny fampiasana ny tsirairay araka ny filako. Aza raisina amin'ny fomba diso fa mila manaiky fotsiny ianao fa raha tianao izany dia hitady ny fomba hahalala azy ianao ary hampifanaraka azy amin'ny zavatra ilainao.
Valiny tamin'i JoseV.
namako malala aho hanandrana zorin you lite hahitako hoe manao ahoana izany ao amin'ny solosaina findainy mini ary holazaiko aminao
Andramo Bodhi miaraka amin'ny kinova vaovao dia hatsaran-tarehy amin'ny milina tsy manam-bola firy, maharary izany
…. Tsy novolavolaina intsony izy io.
Edgar Ilasaca Aquima dia hoy izy:
Namaky ny hevitrao aho, ny olana lehibe manjo ahy, ny fananako HP pavilion dv1010la AMD Athlon, miaraka amin'ny 2 GB, dia ny fanjifana ny bateria laptop, izay maharitra adiny iray mahery, mampiasa CUB Linux aho (Ubuntu miaraka amin'ny fisehoan'ny Chrome OS), saingy tiako ho fantatra ny fizarana iza no mahomby indrindra amin'ny fanjifana bateria, ary raha azo atao, lazao amiko hoe hatraiza ny karazan'ilay processeur misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny distro.
Fiarahabana avy any Peru
Valiny tamin'i Edgar Ilasaca Aquima
Jose Vega dia hoy izy:
Ahoana ihany, satria tato ho ato dia nanandrana kinova be dia be aho nisintona azy ireo, nandoro azy mandra-pahatapitry ny kapila hehe, avy eo napetrako tao amin'ny USB mandra-pahitako ny tsara indrindra ho an'ny netbook hp 1100 izay manana atoma sy ondrilahy 1 gb, ny Ireo niasa tsara indrindra tamiko dia ny Elementary (elemental-os-freya-32-bit-multi-ubu), fanontana ubuntu netbook (ubuntu-netbook-edition-10.10) fa ny fanohanana kosa efa najanona ka naovako ihany koa, Kali (kali- linux-2016.2-i386) tena tsara fa ny marina dia tsy hampiasa ny fitaovany rehetra aho tamin'ny farany dia nijanona niaraka tamin'i Pepermint (Peppermint-7-20160616-i386) na iray tamin'ireo izay fantatro ny karatra tambajotra tsy misy tariby ary mandeha tsara izany, indraindray ny somary miadana ny fanabeazana fototra, fa ny fampisehoana ankapobeny dia tsara amin'ny distro rehetra.
Valiny tamin'i Jose Vega
Azafady mba lazao amiko izay safidy linux tsara indrindra ho an'ny laptop laptop dell i5 6gb ram 350 hd
Salama, manana fangatahana aho. Tsy mpampiasa linux mahazatra aho, ary manana netbook taloha (efa ho 10 taona) izay nihazakazaka tamin'ny XP, saingy may ny kapila. Ankehitriny te-hametraka OS sasantsasany aho hampiasa azy io hanoratanao Internet. (Raha lazaina amin'ny fomba hentitra, ny zokiko lahy, izay 73 taona, dia hampiasa azy io ary hampiasa mailaka fotsiny, hamaky gazety ary hanoratra ilay antontan-taratasy hafahafa.)
Niezaka ny nametraka ny Lubuntu atoro ahy eto aho ary milamina ny zava-drehetra mandra-pahatongako hafatra diso fa tsy nahomby ny fametrahana ny bootloader Grub.
Ankehitriny, efa ho antsasaky ny OS ilay izy ary tsy haiko ny mampandeha azy ...
Izao ny fangatahana. Hihazakazaka amin'ny milina taloha toy izany ve i Lubuntu? Mamporisika distro hafa maivana sy sariaka ve ianao?
Ireto ny mampiavaka ny harato: HP Mini 110-1020la Netbook, Intel Atom N270 Processor (1.60 GHz), 1GB DDR2 Memory, 10.1 Screen WSVGA Screen, 160GB Hard Drive, 802.11b / g Network, Windows XP Home SP3.
Lahatsoratra tena tsara! Hiezaka ny sasany amin'ny vakiteny aho ary hanambatra azy ireo miaraka amin'ity tranonkala ity: https://andro2id.com/mejores-distribuciones-linux-ligeras/
Reraka aho nanandrana distros linux, tao amin'ny netbook exo 355 an'ny governemanta Arzantina, miaraka amin'ny ondrilahy 2g izay nampiana x izay niaraka tamin'ny 1g. ary ny distro izay niasa tsara indrindra tamin'ny hafainganam-pandeha mafy orina, ny fitoniana ary satria manana ny mpamily rehetra izy dia point linux mate 3.2 pipa amin'ny zava-drehetra dia milamina tsara ary mandany ny mozika sy ny firefox amin'ny facebook feno, zara raha mahatratra 500 megabytes an'ny ram, hoy ny mpanara-maso ny rafitra, dia mamantatra wi-fi, sy izay rehetra apetrakao, ho ahy amin'ity karazana milina ity, ny distro tsara indrindra mifototra amin'ny debian… ..
Mamaly an'i jose luis gomez
Fizarana faharoa fizahana fizahana Debian + Mate +
Tonga ny SuperTuxKart 0.8.1 feno vaovao